Depiote maromaro : Saika hisolelaka teny amin’ny fonenan-dRajoelina -
AccueilSongandinaDepiote maromaro : Saika hisolelaka teny amin’ny fonenan-dRajoelina
Sarotra tokoa ny mahatoky olona amin’ izao vanim-potoana izao, satria dia efa misy ny zatra ny lalan-dririnina ary tsy mena mivadika tahaka ny andro ririna tokoa ireo mpanao politika. Amin’ ny maha hakaiky ny fifidianana izay tontosaina amin ‘ity taona ity dia tsy azo lavina intsony ny fisian’ireo mpanao politika na ihany koa mpanolotsaina misehatra amin’ ny serasera mijery sy manao pi -maso ireo izay fantany fa matanjaka amin ‘ny fifidianana ho avy. Ary tsy azo lavina fa efa misy ny mandondo-baravarana ireo izay nihaviany sy nampanan-karena azy, na dia nolaviny fatratra aza io naha mpanao politika azy sy naha mpandraharaha azy io noho ny fitiavany seza tamin’ity fitondrana ity. Araka ny tenin’ny taolo tokoa mantsy hoe ny mpamosavy mandeha alina aza misy mahita, maika fa fiara vaventy sy olona fata-daza eto amin’ ny firenena miazo ny lalam-pirenena faha roa iny. Araka ny loharanom-baovao azo aloha dia miisa efatra eo ho eo ireo olona amin’ izao fitondrana izao no efa nihaona tamin’ ny filohan ‘ny tetezamita teo aloha teny amin ‘ny tranony tetsy Ambohimangakely. Talanjana sy taitra ihany koa ireo mpitsiraka nahita ireo fiara lehibe zay fantatra fa an’ny mpanao politika amin’ izao fitondrana izao, nihiditra ny vavahady. Ankoatra ireo dia fantatra ihany koa fa efa nisy solombavam-bahoaka miisa roa manohana ny fitondrana sady sady navitrika amin’ izany no mangataka ny hihaona amin’ dRajoelina amin’ izao fotoana izao, saingy mbola tsy namaly ity farany noho ireo solombavam-bahoaka ireo namadika azy.
Midika izany fa misy ireo mpanao politika ankehitriny efa tsy mari-pototra intsony fa mamy ny atsy fy ny eroa, izany hoe raha tsy tafita ny iray dia mankany amin’ iray. Izany fomba fanao politika izany anefa izay manimba tanteraka ny firenena, satria dia efa tombotsoan’izy ireo samy irery no tadiaviny. Manginy fotsiny ny tsy fanana ethika politika mazava amin’ izay fomba ho entina mampandroso. Fanontaniana tokoa mantsy no mipetraka amin’ izao fisokafan’ ny ady hevitra amin’ ny lalàm-panorenena izao hoe nankaiza ireo solombavam-bahoaka sy ireo fikambanana ary antoko politika manohana ny fitondrana no tsy tazana intsony. midika izany fa tokony efa ho mailo tanteraka ny filoham-pirenena amin’ ireo izay mety hamadika azy ara-politika, indrindra ireo izay efa zatra nanao izany. Izany hoe ireo olona tamin’ ny tetezamita izay niaraka tamin’ i Andry Rajoelina ary nandoha ity farany indray noho ny nankanesany aty amin’ ny fitondrana Rajaonarimampianina indray. Izy ireo tokoa no mety ho fosotra mety hanaratsy ny fitondrana izay misy, ka hanosopotoka ireo izay efa ezaka vita sy natsangana tao anatin’ izay efa taona izay. Andrasana noho izany ny fanadiovana izay mety hitranga.